Home Wararka Mar kale Kaligii talis Danbe Maya.
Mar kale Kaligii talis Danbe Maya.
Dalkaan waxaa uu soo maray laba hogaamiye oo u dhashay beesha Marreexaan, Maxamed Siyaad Barre oo xoog ku qabsaday kadib markii uu afgambiyey dowladdii ay shacabka soo doorteen, kuna timid rabitaanka shacbiga. Cidi kuma faaneyso inay ahayd dowlad dhameystiran oo ay hay’adaheeda qarameed wada dhisnaayeen, hasa yeeshee waxaa lagu faani karaa inay ahayd dowlad ay dadku soo doorteen oo aan xoog iyo qori caaraddii ku imaanin talada.
Laba madaxweyne ayaa dowladdaas talada dalka lakala wareegay, kuwaas oo rabbi ha u naxariistee kala ahaa Aden Cabdulle Cisman iyo Cabdurashid Cali Sharmarke. Waxay xukunka ku yimaadeen rabitaanka shacbiga iyo doorasho ay dadka ka wada qeybgaleen intii kartay xelligaas waxaana lagu kala baxay sanduuqa codka.
Aden Cadde oo hal cod oo barlamanka ah looga guuleystay waxaa uu si sharf leh ugu wareejiyey taladii dalka madaxdweynihii ka guuleystay Cabdurashid Cali Sharmarke, hasa yeeshe madaxdweyne Cabdurashiid nasiibkaas ma yeelan waxaa ku baxay gacanta shakhsi ka gar daran, iyadoo malaha uu yahay inuu fagambiga uu Maxamed Siyaad sameeyey uu lug ku lahaa dilka MW Cabdurashiid.
Haddaba 21 Oktober 1969 waxaa habeen Talaada ah xukunkii dalka kufsaday oo xoog kula wareegay Maxamed Siyaad Barre oo talada dalka hayey ilaa uu ka hubsado inay dhamaan burbureen wixii uu dalku lahaa maadi, maskax iyo maalba. 21 sano iyo 3 bilood oo uu talada hayey waxaa uu dalka uga tagay meel uusan weli ka soo waaqsan wixii uu ku sameeyey. Waxaa uu la dagaalay inay korto masakaxda iyo aragtida dadka Somaliyeed waxaanu ka reebay facood. Maanta dalkeenna waa kan ugu liita waddamada deriska oo aan ka horreyn jirnay. Maxamed Siyaad waa garan waayey xoog baad ku qabsataye nabad uga tag, wax baad dhistaye ha burburinin, waxaana dibadjoog iyo foolxumo uu ugu dhintay dhul ninkiisii dhistay oo ilaashaday oo ah dalka Nayjeeriya. Maanta wixii uu nooga tagay ayaa na haysta oo mid uu adeer u yahay oo raba inuu sidaas na yeelo ayaa ku fadhiya kursiga dalka looga taliyo.
8-dii Febraayo 2017 oo runtii noqotay bar madow oo uu dalkaan leeyahay markale sidii 21 kii Oktober 1969 ayaa waxaan gacmaha xildhibaanno aan xilkas ahayn ku doorannay ruux ay daltabyo u hayso kalitalsinimo oo raba inuu maro waddadii uu adeerkiis na marsiiyey oo ah muddo dheer rafaad iyo dhib ah iyo dhiig daata oo ka dambeeya. Ruuxaas waa Maxamed Cabdulaahi Farmajo. Ninka uu rabo inuu soo minguuriyo dhaqankiisa iyo habkiisii kharribnaa oo ah Maxamed Siyaad wax weyn ayaa u dhaxeeya, waayo dadka Somaliyeed maaha kuwii uu Maxamed Siyaad Kufsaday isagoo isticmaalay awoodda ciidankii dalka inay difaacaan loo dhisay balse uu sharafta ka dilay. Farmajo ma isticmaali karo haddii uu isticmaalana kuma guuleysan karo waayo waxa ka dambeeya oo ah dab iyo middiyo soofeysan ayaa ka la og yahay. Sidaas darted cidi ka yeeli meyso oo waxaa lagu bixi doonaa.
Haddaba ceeb maaha haddii dadka ama qabiilka waxa ay caanka ku yihiin lagu sheego, lana ogaado waxa looga talageli karo marka ay talada umadda qabtaan. Beesha Marreexaan waxaa talada dalka ka soo maray laba hogaamiye oo la eeday dhaxalkooda marka mid dambe oo beeshaas ah maaha wax la aamini karo oo lagu dhiiran karo. Sidaas darted Mareexaan Dambe Maya inay qabtaan xilalka ugu sarreeya dalka oo mar kale baaba’a noo horseedaan.